Kufanirwa kwechando 2017 na 2018 inotanga rinhi? | Network Meteorology
Chando chichava sei?
Nguva yechando ndiyo mwaka yatinowanzo batana nayo nechando, nzvimbo dzine chando, dzihwa, mitambo yechando. Asi zvinoita sekunge padiki nepadiki kunorebesa, kuti ipapo mazuva mashoma anouya mune akadzika tembiricha anonyoreswa, asi kuti nekukurumidza anopfuura uye chitubu chinodzoka. Ndekupi, zvino, iko kutonhora uko kwakatiita kuti tidedere pese pataibuda mumugwagwa? Zvinototaridza sekunge mafungu anotonhora atinawo iye zvino haana kuita sepakutanga.
Muchikamu chino tichaita ongororo yekuti chando 2017 yanga yakaita sei, uye zvingave sei mumakore mashoma anotevera. Nguva yechando inopinda rini? Ngationei.
1 Nguva yechando inopinda rini?
2 Nguva yechando 2017 Pfupiso
3 Nguva yechando 2016 pfupiso
4 Chando 2018 chichava sei? Uye anotevera?
Nguva yechando inopinda rini?
¿Kana nguva yechando yatanga? Nguva yechando inguva inotarisirwa nevakawanda. Mushure mekupisa kwazvo zhizha, iwe unowanzo kuda kuti mwedzi inotonhora kwazvo yegore isvike nekukurumidza sezvazvinogona. Kunyangwe vachigona kutiunzira chirwere chisinganzwisisike, senge furuwenza kana dzihwa, panguva ino tinonyatsoda kuenda kumigwagwa kana kumaruwa uye kunakidzwa nemitambo yechando.
Asi nguva yechando inouya rinhi? Zvakanaka zvinoenderana nekuti ndeupi nyika yepasi iwe urimo 🙂. Nekudaro, kana iwe uri kuchamhembe hemisphere, zuva rekutanga zviri pamutemo ndiDecember 20 kana 21, nepo kana uri kumaodzanyemba kwenyika, iro zuva ndiJune 20 kana 21.
Nguva yechando 2017 Pfupiso
Maererano ne data yeHurumende Meteorological Agency (AEMET) mwaka wechando wa2017 aive nehunhu hwakadziya uye hwakaoma. Avhareji tembiricha yaive 8,5ºC, inova 0,6ºC kupfuura avhareji yemwaka uno, kutora 1981-2010 senguva yekureva. Yange iri nguva yechando yegumi nematatu inotonhora kubva 1965, uye yechina inopisa kubva muzana ramakumi maviri nemasere rakatanga, kumashure kwa2015-16, 2000-01 na 2007-08.
Vakanyoresa zvakanaka kupisa kwemafuta dzakakomberedza + 1ºC kuGalicia, Catalonia, Balearic Islands, Valencian Community, pamwe neCantabrian, Iberian neCentral masystem, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweCastilla-La Mancha uye maodzanyemba akadziva kumadokero kweCastilla y León. Kune dzimwe nyika, zvimisikidzo zvaive zvisina kunaka, pakati pe0 ne -1ºC.
Kana tikataura nezvemvura inonaya, yaiwanzooma, paine avhareji yemvura inonaya makumi maviri muzana pane zvakajairwa, inova 160mm. Zvita naJanuary zvaive zvakaoma, asi munzvimbo dzekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva peninsula neBalearic Islands kwaive kwakanyorova kwazvo. Muzvitsuwa zveCanary, Extremadura uye pakati peAndalusia pakanga pakaoma kana kuoma.
Nguva yechando 2016 pfupiso
Nguva yechando 2016 yakatanga musi waZvita 22, 2015, uye ikapera musi waKurume 20. Yaive inonakidza mwedzi mishoma, mairi zvinyorwa zvakanyorwa, kunaya kwemvura uye tembiricha.
Sekureva kwezvakafungidzirwa neAEMET, zvaitarisirwa kuti kuchamhembe kwehafu peninsula kwaizonaya kupfuura zvakajairika, uye kuti kune dzimwe nyika kunaya kwemvura kunoramba kuri mumiganhu yakajairwa; Mune mamwe mazwi, kana ikasawanzonaya munzvimbo yako, gore rino hapazove neshanduko huru futi. Saka zvaive zvakadaro.
Nechekare muna Ndira 11, 2016 isu tanga tichitaura nezve a dutu rine simba raiparadza mhiri kuchamhembe, kunyanya muPontevedra, Lugo uye A Coruña. Kwemazuva mvura haina kumira kudonha, mafashama emigwagwa uye ichikonzera kukukurwa kwevhu, kutemwa kwemigwagwa uye kunyangwe nzizi dzichizadza. Mumwedzi uno avhareji yekunaya kwemvura yaive 90mm, 41% kupfuura zvakajairwa (63mm).
Muna Kukadzi takaita rimwe dutu, ine mafungu anosvika 11,95km nemhepo dzakavhuvhuta zvine simba guru, dzinosvika 170km / h kuchamhembe. Panguva ino, matunhu akanyanya kubatwa aive San Sebastián, kuwedzera kuGalicia. Asi mvura yakanaya zvakanyanya kuyambuka kuchamhembe. Mwedzi uno wanga wakanyorova kwazvo, paine avhareji yekunaya kwe 88mm (kukosha kuri 66% kukwira pane zvakajairwa, iri 53mm).
Muna Kurume kunaya kwemvura kwakaramba kuri pane zvakajairwa tsika, kunze kwenzvimbo yepeninsular yekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva uye neBalearic Islands, ayo aive akaderera.
Sekureva kweAEMET, iko kwaizonaya kupfuura zvaitarisirwa, ndipo paizosara iyo mercury iri mu thermometer yaizoramba iri pane zvakajairwa tsika. pachinzvimbo, mune dzimwe nharaunda munogona kuve nemakumi mashanu neshanu muzana% kuti vangave nenguva inotonhora kupfuura yechinyakare. Ndazvibata zvakanaka
Kune chikamu chikuru hongu. Muna Ndira avhareji tembiricha yaive 9.5ºC (2,3ºC kupfuura zvakajairwa, kutora 1981-2010 seyakarehwa nguva), nekudaro ichiva inodziya kubvira 1961. Muchikamu chekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwepeninsula uye mune mamwe mativi ekumaodzanyemba kupisa kwemhepo kwakadzikira, pa1ºC.
MunaFebruary muhafu yekumabvazuva kwepeninsula, Balearic Islands uye mune dzimwe nzvimbo dzeCanary archipelago, tembiricha yave iri pakati 0,5 uye 2,5ºC kumusoro (chirevo nguva: 1981-2010). Mune dzimwe nzvimbo dzeSpain, tsika dzakaramba dzakajairika kana kudzikira zvishoma, kunyanya munzvimbo dzemakomo eMakomo eCantabrian, Sierra Morena, Sistema Central uye Sistema Béltico. Iwo akanyanya tembiricha aive 0,2ºC akakwira, uye iwo mashoma tembiricha 1,2ºC akakwirira kupfuura zvakajairwa, saka kupisa kwemazuva kupisa kwaive kwakaderera kune zvazvinofanira kuva.
Muna March, tembiricha yakaramba ichidarika zvakajairwa tsika, kunyanya muhafu yekumabvazuva kwenyika, kusanganisira Balearic archipelago, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwe quadrant uye muCanary Islands. In kuchamhembe kwakadziva kumadokero quadrant pakanga pasina shanduko huru.
Chando 2018 chichava sei? Uye anotevera?
Kunyangwe nhasi (Chikunguru 11, 2017) zvichiri zvishoma kutanga kuti uzive kuti chinotevera chando chichava sei, zvingangoita zvakafanana kana zvakafanana chaizvo nezvatakapfuura, ine avhareji tembiricha ye8-9ºC, asi kudzamara mazuva ave kuswedera uye fungidziro mamodheru akasabuda, zvichanetsa kuziva uine chokwadi chidiki.
Kufunga nezve izvo, maererano nezvakafanotaurwa, 2016 ichave inotonhora kwazvo munhoroondo, kunyangwe ichipfuura 2015, uye izvo iyo El Niño chiitiko chinobatsira iyo mercury mune thermometer kuramba ichikwira, avhareji tembiricha ingangosvika 1,14ºC. Izvi zvinoreva kuti tichava nenguva yechando iyo ichave iri kudziya uye kuoma, kunyanya mudunhu reMediterranean.
Nekudaro, El Niño inoramba ichishanda pakati pemwedzi misere negumi, saka kana mhedzisiro yayo ikatanga kucherechedzwa munaNovember 8, zvinokwanisika (kwete chokwadi) kuti munaGunyana 10 tichaenda kuchikamu chisina kwachakarerekera. Asi izvi hazvireve kuti marekodhi tembiricha haatarisirwe, kubvira kudziya kwepasi rose chiitiko chisingamireKunze kwekunge matanho anoshanda chaizvo atorwa kudzikisa kubuda kwemweya wakasvibisa mudenga, kana vanhu havangaregi kusvibisa nyika kubva kune rimwe zuva kusvika rinotevera. Uye kunyange zvakadaro, Makore zviuru gumi zvaizofanira kupfuura kuti pasi riwanezve.
Nekudaro, pamwe tinopedzisira tave neKisimusi yakaoma pamwe chete, uye kunyanya inodziya, pasi pedenga rebhuruu iro rinenge riine yepamusoro wevasungwa girinihausi, kunge kabhoni dhayokisaidhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Network Meteorology » Kufungidzira » Chando chichava sei?
Omar sanchez akadaro
ZVINOKOSHA KUTI VARIMI VAZIVE NEZVO RINI? WINTER ICHAPINDA
KUTI MUVE nechokwadi KUTI KUKOHWA
Pindura Omar Sanchez
Varimi, pamwe nevanofarira gadheni, vanofanirwa kuziva mamiriro ekunze munharaunda mavo kuti vazive zvavanogona kurima. Neiyi kudziya kwepasirese, ichi chinhu chinoramba chichifungidzira.
eduard lopez akadaro
shanduko yemamiriro ekunze inogona kuwedzera kunaya muSpain?
Pindura kune eduard lopez
Asi zvinopesana, vanogona kudzikira. Muchokwadi, muMediterranean, semuenzaniso, vakatoderera ne27% uye vanotarisirwa kuramba vachiderera. Chinyorwa chakaburitswa mupepanhau reNature pane maratidzirwo anoitwa kunaya kwemvura nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze. Ndizvo izvi.
Monica, ndatora mitsara iyi kubva kuchinyorwa chako: «... kudziya kwepasi rose chiitiko chisiri kuzomira, kunze kwekunge matanho chaiwo achinge atorwa ekuderedza kubuda kwemweya wakasvibisa mudenga, uye vanhuwo havangadaro. kurega kusvibisa nyika kubva kune rimwe zuva kusvika rinotevera. Uye kunyangwe zvakadaro, zvaizotora makore zviuru gumi kuti pasi rivezve…. ».
Kubva pane zvaunotaura, kupera kwenyika kuri kuswedera nekuti hupofu hwevatungamiriri venyika haumise kuburitsa magasi anosvibisa uye tembiricha yepasirese yepasi ichawedzera uye ichawedzera kudzamara tanyatsotsva. Makungwa achanyangarika uye hupenyu pasi hahuzovepo. Iwe unotaura zvakare kuti mune yekufungidzira nyaya yekuti hunhu hwakamira kuburitsa magasi anosvibisa mudenga, zvaizotora makore zviuru gumi kuti uwanezve.
Ini handizive kana iwe uchiziva kuwanda kwematauriro ako asi ari ekutyisidzira chero munhu. Ndinovimba veruzhinji havasi kuvhunduka nezvakataurwa.
Ingoti maererano neruzivo rudiki uye maringe nechando chakapfuura uye kupisa kwezhizha rino mwaka uno kuchatonhora uye mune mamwe matunhu tichaona sinou
Zvichida zvakanaka, hongu. Tichaona.
Muri kutengeswa uye munonyepa, kwakawanda kudziya kwepasi asi hapana chinotaurwa nezve cheamtrails. Ucharega riini kuita kuti vanhu vanzwe vane mhosva uye kushora hurumende dzako….
Iyi webhu yemeteorology kwete yezvematongerwo enyika.
Pindura kuna ELPARDO
Ini ndingazoshamisika kana ino nguva yechando yaitonhora zvakanyanya, kupfuura chero chinhu nekuti isu tine mashoma ayo akareruka ... uye iri kuramba ichitonhora, pakupedzisira tichazove tembiricha yeMediterranean
Ivhareji tembiricha yeSpain inogona kusimuka zvishoma, asi isu tichaona.
Usagadzirise mamiriro ekunze uye uchaona kuti kunonaya yakawanda
Ehe, kana tikasasvibisa mamiriro ekunze angave akasiyana zvakanyanya. Kwazisai Luis.
Ndinovimba kuri kutonhora kwazvo muAndalusia iyo inogara ichinyura uye ini ndatova ndaneta nekutonhora kwakanyanya kupisa
Iwe haugone kumirira kuti zhizha ripere, hu? heh heh Ndinovimba zvakatonhora zvirinani.
Kuti 2016 yaizove iri inopisa kwazvo zhizha munhoroondo? Zvakanaka, hazvisi kuzoitika, muna 2015 takaita grill muno muMurcia asi gore rino harina kana padhuze negore rapfuura, tichitora mazuva akasununguka ezvekupisa zvakanyanya, asi pane izvo zvatajaira kuno muzhizha ini handidi wazviona here.
Mune akawanda mapoinzi kwave kutonhorera kupfuura yapfuura, ichokwadi. Kwandinogara (Mallorca), zhizha rave zvakare kutonhorera, takatopedza husiku hwakawanda tisina fan. Asi avhareji tembiricha yepasi inoramba ichikwira.
Miquel Vidal Barceló akadaro
Mhoro Monica anobva kuMallorca, wanyatsotaura chokwadi, zhizha rave nyoro asi miti iri kufa nenyota!
Tsitsi kune vese
Pindura Miquel Vidal Barceló
Kana chiri chokwadi. Chaizvoizvo hapana chakanaya, uye madonhwe mashoma akadonha akakurumidza kubuda. Ngatitarisirei kuti kwanaya izvozvi mukudonha.
mubvunzo uchatonhora here munguva ino yechando? kupfuura yapfuura?
Mhoro mubvunzo ko ino nguva yechando ichave inotonhorera kupfuura yekupedzisira here?
Zvichida here kuti chando ichi chando muMadrid? (Nekuti ichave inotonhorera)
Kune mimwe mikana yakawanda here kuti gore rino chando muMadrid? (Ndinovimba SNOW), ndinozvitaura nekuti sezvaunotaura zvinogona kutonhorera ... Ndinovimba ZUVA hahahahaha
Chii chichava ichi chando muDallas Tx?
Izvo hazvigoneke kuziva zvechokwadi kuti inguvai ichave iri mumwedzi 3-4. Izvo zvinozivikanwa ndezvekuti, kana La Laña chiitiko chikaitwa, North America inotonhora. Muchokwadi, mumaguta akaita seNew York panogona kuve nekukosha kwechando.
MuSpain hazvizivikanwe kuti chiitiko ichi chinokanganisa sei, kana chikaitwa. Asi chinhu chakajairika (kana icho chaive chakajairika) ndechekuti mushure menguva yechando inodziya inotonhora kana inotonhora zvikuru inouya, kunyanya kana tembiricha yezhizha yanga ichisvika zvakanyanya kana zvishoma zvakajairika tsika sezvayanga iri uye iri gore rino.
Kana tangoziva zvakawanda, isu tinokuzivisa iwe.
Sandra Naharro Gomez akadaro
Mhoro, zvakanaka kwazvo, ndiri sei Sandra uye ndiri kufarira kwazvo dingindira rechando ini ndinogara muBarcelona uye ndingade kuziva kana ichave nyowani kana kwete? Kana kana zvichingoita chando kupfuura zvakajairika panguva yatiri kunaya mvura yakawanda kupfuura zvakajairwa nenzira usanetseke kana ukasaiwana nemazvo sezvo mamiriro ekunze akaoma zvakanyanya, kwaziso
Pindura kuna Sandra Naharro Gómez
Hazvigoneke kuziva kuti mamiriro ekunze achange akaita sei, zvirinani chokwadi.
Tinofanira kumirira uye tione kana chiitiko cheLa Niña chakaitwa, uye tione kana kuSpain tinozviona kana kwete.
Mukudaro, ndinopokana zvakanyanya kuti inotonhora kupfuura zvakajairwa kumabvazuva kwepeninsula neBalearic Islands. Mhepo ine simba yaizofanira kubva kuNorth (Siberia, semuenzaniso) kuitira kuti titonhorere muMediterranean, inonzi inotonhora, ndiko kuti, tembiricha isingasvike -4ºC yakanyorwa.
Tarisa, ino nguva yechando inogona kutonhora, nguva yadarika yechando yaidziya kunyangwe hazvo, mhepo inotonhorera yemhepo yakauya uye ikanaya sinou pamwero wegungwa, asi kwete senge muna 2015 ini ndinogara mutaundi muAragon 150 metres kubva pagungwa uye ndine ndaona sinou inorema mune yangu makore gumi nematanhatu ekuberekwa andina ..
Vanotaura zvakawanda nezve kudziya kwepasi asi havatauri kuti tiri munguva yechando chisi. Winters iri kuwedzera kutonhora uye kutonhora, kunyanya kuNorth America neEurope neAsia ...
Asi unoti kudii Victor.
Iwe hauzive ... unotyisa
Ndinoda kuziva kana kuchizonaya mvura yakawanda munguva ino yechando. Ndotenda zvikuru
Mukutaura ndingati hongu, asi haugone kuziva zvechokwadi. Zvinoenderana nechikamu chenyika chaunogara, kukwirira, mhepo, nezvimwe.
Mhoroi, ndinobva Torre Pacheco mudunhu reMurcia uye ndinoda kuziva kana kuchanaya zvakajairika. Uye kana tembiricha iri pazasi pevhareji ichave yakanyorwa mune yekuvhuvhu yechando nharaunda. Uye ini zvakare ndaida kuziva kana uku kudonha mukana wekuonekwa kwekutyisa kunotonhora kudonhedza DANA kwakakwirira, maita basa.
Nehurombo, haugone kuziva zvechokwadi.
Zvichida kuti ichave nyowani, uye iyo yakajairika kana yakanyanya kukwirira kunaya kwemvura kunonyoreswa munyika, asi hakuna imwe inogona kutsanangurwa kusvika imwe nguva yadarika.
Ndeipi fungidziro yekuvhuvhu yaunayo yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero peninsula? Huelva Seville Cadiz naBadajoz
Mhoroi, ndinotya uye ndakapererwa nenyaya yekusanaya kwemvura uye shanduko yemamiriro ekunze, ndinobva kudhorobha muSierra de Huelva, Aroche uye ndinoda kuziva kuti tichanaya here mwaka wekuvhuvhu unouya, kana ichava nguva yechando chaiyo kana kuti tichafanira kutanga Kwaziso kubva kuguta rino rakanaka reHuelva.
Mhoro, inguvai yechando inotarisirwa muSierra Nevada, zvakapfuura zvaidziya zvisingaite kwete zvinotevera ===========
Pindura kuna juanma
Zvakanaka, chando ichi chichava sei muNavarre? Mvura ichanaya kupfuura yapfuura here? Ndinovimba zvichave zvakadaro
Mhoro. Ndiri kugara muSagunto guta, guta riri muValencia. NDINONYANYA KUNYANYA nekupisa uku kwemakore ekupedzisira uye mwaka wenguva yechando weChichinabo. Kutonhora kana kunaya. Kunyanya hunyoro hunopisa hunopinda mumapfupa. Kuti vakandiisa mudhirowa revapanduki, ndinodada kwazvo! Ndiri kurwara neaya madhimoni emakemikari nzira dzinogura mvura kana paine geandes makore matema ave kuda kunaya (ndakazviona nemaziso angu) Ini ndaneta uye ndakasuruvara kunyanya kumazera matsva 🙁
Miguel Angel Sánchez lamuela akadaro
Mhoroi, ini ndinobva kuguta muAragon kunyanya Almonacid de la Sierra uye ndinonetsekana nezve iyo ingangoita shanduko yemamiriro ekunze. Kunonaya zvishoma nezvishoma, gore rino kune kusanaya kwemvura kunotyisa, matsime anooma, zvirimwa zvinooma. Ndinoyeuka pandakanga ndiri mwana kuti kwakanaya zvakanyanya kupfuura izvozvi, uye kwakanaya chando kupfuura ikozvino. Chandisingazive ndechekuti kana iwo mamiriro ekunze ehudiki hwangu waive mutemo kana kunze. Ini handisi kuzobvunza nezve fungidziro yematsutso nekuti ndiri kufarira chinhu ichi chemamiriro ekunze chandinoona chinonakidza sezvo chakaomarara pakuita fungidziro yenguva refu. Tin inonaya zvakaoma. Ndinoda kuti kunaya Kwaziso.
Pindura Miguel Angel Sánchez lamuela
Mhoroi, munaNovember ndiri kuenda kunoita iyo Camino de Santiago, iyo French, zvinoita here kuziva kuti inguvai iri kuchamhembe kweSpain munaNovember?
Mhoroi, ini ndinobva kuguta muValencia anenge makumi maviri km. Kubva kumahombekombe… ..uye kana ndakanzwa nezvekubvisa kana kudzivirira kuti isanaya kana kudzivirira dutu. Ini handizive kuti ichokwadi zvakadii uye kana zviri izvo handizive nepfungwa yavanozviita….
Francisco Javier Perez Armas akadaro
kuti chando chichaonekwa sei mumakanari, kunyanya kuzvitsuwa zvekumadokero. Thanks Monica
Pindura francisco javier perez armas
Inogona kutonhorera kupfuura yapfuura nyika, uye mvura yakawanda ingangodaro La Niña ikapinda. Asi iwe haugone kuziva zvechokwadi.
Salvador Segui akadaro
Mangwanani akanaka, muValencia munguva ino yechando tichava - 3o 4 madhigirii, ichaomesesa macitrus?
Pindura Salvador Segui
Iwe haugone kuziva zvechokwadi. Chandinogona kukuudza ndechekuti zvinoenderana nemuchero wemuchero, senge orenji kana ndimu, vanomira zvakanaka kusvika kuchando chinyoro kusvika -4ºC.
suaoker gaizto akadaro
Ini ndinonyatso rangarira kuti pana tve1 pakupera kwechando chapfuura ivo vakataura mune imwe yemamiriro ekunze ezvemamiriro ekunze ayo ivo vakapa kuti sekureva kwandisingazive kuti ndevapi mhando dzavaityaira, ino nguva yechando iri kuuya yaizodarika yapfuura, kureva kuti, iri kuuya nguva yechando yaizofanana kana kutopisa ……… .. Ndinovimba vakanganisa
Pindura kuna suaoker gaizto
Ngativimbei. Asi tichaona zvinoitika.
Mhoro Mai: Mónica sanchez, ndinongoda kubvunza kuti gore rino kuchanaya chando kunaani dunhu reLagunera
Ini ndaida kungobvunza 🙂
Mhoro! Mai Monica, ndinofara kuti vanhu vakati wandei vanofarira mamiriro ekunze, ndinodawo kugara muTijuana Baja California Norte uye yakanyatsooma nekupisa, mvura shoma, kwemakore mashoma haina kunaya sepakutanga uye muzhizha rino yakakwira kupfuura tembiricha yakajairwa. Tinovimba kunonaya nekuti mvura inodiwa. Zvido.
Mhoroi Mai Monica, mubvunzo wangu wakakomba uchava muzhizha rino Peruvia sierra ichave ichinaya kana kwete
Mhoroi, yakadonha sei nguva yechando mudunhu rekadiz?
Manheru akanaka. Tiri kuita dutu rine simba muBarcelona ine michina yakawanda yemagetsi, iyo yanga yakamira pamusoro peguta kweanenge maawa mashanu uye ichienderera. Ichokwadi ndechekuti inokosheswa mushure mekupisa uye kuoma kwaGunyana, iine marekodhi etembiricha, kunyangwe hazvo zhizha kazhinji harina kunyanya kupisa.
Nguva inotevera yechando? Ndiani anoziva.
Zviripachena kuti zvakanyanya uye zvakawanda zvinozivikanwa nezve mamiriro ekunze, uye izvozvi nekusingaperi kwemidziyo yatinayo pawebhu, kuwedzera kune ruzivo rwekugara. Hatiregi kuona mamodheru emamiriro ekunze ane fungidziro nguva dzese, kune mamwe mamamiriro ekunze ayo anoisa zvimiro zvemwedzi mipfumbamwe, nekushanduka kwenzvimbo yese yemuchadenga maawa matanhatu ese.
Asi izvi zvese hazvivimbise chero chinhu, kutaura zvazviri zvinotibatsira chete kuziva kana kufanotaura zvimwe pamusoro pemamiriro ekunze epasi redu, makomputa makuru atakaronga. Asi mamiriro ekunze paPasi ane zvakawanda kupfuura fungidziro dzenhamba zvichibva pane zvakaunganidzwa munguva pfupi kwazvo.Kushanduka kwemamiriro ekunze hongu hongu. Asi ndeyekuti Pasi rave riri mukushanduka kwekushanduka kwemamiriro ekunze kwemakore zviuru mazana mana nemazana mashanu.
Chokwadi. Shanduko yemamiriro ekunze haisi chiitiko chitsva, chikamu chemukati chenyika.
Asi ikozvino, nekuda kwetekinoroji, kusvibiswa uye kudiwa kwekupinda munzvimbo shoma dzakasvibira dzatakasiya, vanhu vanokwanisa kushandura mamiriro ekunze.
Ndizvozvo, uye zvisati zvamboitika munhoroondo yepasi redu pane chinhu chevanhu chakapinda shanduko yemamiriro ekunze. Isu tanga tichikurudzira mamiriro ekunze kweanopfuura makore zana, akawedzera zvakanyanya mumakumi emakore apfuura.
Uku kusanganiswa kwevanhu nezvinhu zvakasikwa zvakadai seChidiki-Musikana chinhu kana maSolar macircuit pakati pevamwe vazhinji, zvinoita kuti ramangwana redu remamiriro ekunze risatombo fungidzira, kupfuura zvaragara riripo.
Dzidziso zhinji dziri kuvhurwa dzinoenda kubva kune imwe yakanyanyisa kuenda kune imwe, kubva kuIzi Age kusvika kune yemugwenga mamiriro ekunze. Asi zviri pachena ndezvekuti hunhu hwevanhu hunogara husina kunaka, kusvibiswa kwePlanet pachayo (Iyo chete yatinayo) Atmosphere, Nyanza, Pasi, zvese zvakasvibiswa.
Isu tiri denda, vakangwara zvakanyanya kana kwete zvakanyanya, Sosaiti haigoni kumira, isu tiri vazhinji, vakawanda uye vanowedzera uye vazhinji vari kupedzwa. Nyika yedu haikure, inova shoma uye diki. Pane fungidziro dzinofungidzira kuti muna 2050 tichava mabhiriyoni gumi nemashanu ezviuru zvevanhu. Iye zvino tava kungodarika zviuru zvinomwe uye muna 12.500 taingova nemamiriyoni gumi nemazana matanhatu chete. Nyika haigone kutsigirwa, nzanga ichawa.
Tinofanira kuchinja zvakanyanya uye ndinotya kuti hazviitike. Zvakawandisa zvido.
Ndinokurudzira Ultimatum kuPasi.
Shanduko yemamiriro ekunze chiitiko chinogona kuunza dutu rechando, muzhizha kupisa zvakanyanya uye gore rega rega kuri kudzidza, mafungu anotonhora munguva yechando uye ane simba, izvo zvaizoita kuwira kwechando muSpain zvine simba uye mikana yakawanda pagungwa, tembiricha yakaderera munguva yechando, uye munoziva madutu, ayo muSpain anogona kuva nesimba seaya ari muBarcelona, ​​panotonhora mhepo yakawanda inotonhora, zvinounza kusagadzikana, uye gungwa rinopisa.
Kana chiitiko cheLa Niña chakakonzera mhepo dzeSW MuPenisual Ibérica, tingave nemvura munguva yechando panzvimbo yechando munzvimbo dzakakwirira muPyrenees?
Mhoroi, ndinoda kuziva kana tembiricha iri kuzodzikira mudunhu reCiudad Real uye kana kuchizonaya zvakanyanya. Kubva nhasi zvakawanda zvinodiwa nekuti zvinonyadzisa kufamba nemumakomo uchiona miti yakaoma.
Mhoro Monica :) Mubvunzo mumwe chete, ini handigadzikane nekupisa uye nechiedza. Ndiri kugara muTuris muValencia uye gore rega rega zvinonyanya kutsungirira. Humidity chete ihwohwo hunopwanya mapfupa uye hunoparadza dzimba nekudzisanzva. Nyangwe kana isiri padyo negungwa.
Ini ndarwara uye saka allergist akazvisimbisa x kuva muzuva zuva rese. Pano zhizha rakapera musi wa31 muNew York gore rino ratakabuda tichimisa masendimita nemadhigirii makumi maviri nemanomwe uye zvakatanga musi wa27 Kukadzi nemadhigirii makumi maviri nekuwedzera. Kunze kwemazuva mashoma akasununguka akawira d kurohwa. Mubvunzo wangu ndewekuti.
Ini ndinoona kufungidzira kweCantabrian kana kunyangwe iwo matsutso akatosvika.
Saka ini ndoda kuziva kana shanduko yemamiriro ekunze inongokanganisa nzvimbo yeMediterranean uye zvimwe zvese kwete zvakanyanya uye izvo? Pano isu tiri kumadokero. Nezuro. Asi hapana munhu mune chero fungidziro anoti kudaro. Izvo zvakajairika? Nekuti haisi kunaya pano uye yanga iri nguva yezhizha nehafu kumusoro, hapachina.Tichazoguma taita seAfrica here? Chii icho icho shanduko isingavabate zvakanyanya uye kana vaine mvura? Valencia iri kuve iyo Spanish California. Kubva exo muLos Angeles kune nzvimbo inonzi Valencia muSanta Clarita uye haina kunaya sezvo ivo vasingatozive ... Uye zvakatanga sekusiyana zvishoma nezvishoma. Kana aki ichikanganisa zvakanyanya, nei muMediterranean tisingatangi kudyara muti x munhu sezvavakatanga kuita imomo? Munzvimbo ye Africa cokindante uye zviri pachena kuchamhembe vanogarwazve uye vagari vemataundi pamwe nekudiridza zvirimwa zvavo zvishoma uyezve vanonetseka nezvemiti kuti vasarasikirwe nemamiriro ekunze. Ndatenda nekuterera kwako. Kwaziso kubva kuna Maria 🙂
Shanduko yemamiriro ekunze inokanganisa nyika yese, asi hongu, kune mamwe matunhu kwaanonyanya kubata. Muchokwadi, mune iri bhurogu isu tinotaura kuti mamiriro ekunze eSpain anogona kuwedzera kufanana neaya eMorocco.
Sei vamwe vatotanga nematsutso uye vamwe vachiri netembiricha yezhizha? Zvakanaka, kuti mamiriro ekunze ave neimwe nzira kana imwe, zvinhu zvinoverengeka zvinofanirwa kupindira: nzvimbo, orography, kukwirira pamusoro pegungwa, tembiricha yegungwa, mhepo, mwaranzi yezuva, nezvimwewo, nezvimwe.
Kazhinji, panopinda dutu kubva kuchamhembe kana kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwepeninsula, inosvika kuMediterranean, uye kunyanya kumaodzanyemba, nekuti panzvimbo idzi, iri padyo neequator, mwaranzi yezuva yakanyanya kunanga, saka gungwa Iyo Mediterranean inogara ichidziya kupfuura iyo, semuenzaniso, Gungwa reGalician.
Nezve wako wekupedzisira mubvunzo. Zvakanaka ini handizive zvekukuudza. Ndinoshuva kuti dai miti yakasimwa mumataundi nemumaguta ese, uye isina kunyanya kutemwa miti Zvinhu zvingadai zviri nani.
Kwaziso, uye kurudziro.
Px meteorologists havatye kushora kamwechete uye kweese mafirigations atinogara takatarisana nawo kwemakore nechinangwa, pakati pevamwe, chekubvisa mvura kuburikidza nekupararira kwesirivhidhi yesirivheri, avo vedu vane mweya uye Tiri kuramba tichiwedzera kurwara nekushaikwa kwemvura ndeyedu tese
Antígono Carjedonio akadaro
Ichokwadi kuti mamiriro ekunze ari kuchinja, agara achidaro, kuti murume anofurira zviri pachena. Ikozvino iyo 100% yekushanduka kwemamiriro ekunze iri anthropogenic, uye kuti nekudzikisa emissions isu tinokwanisa kudzora zvakataurwa shanduko, zvakanyanya kwazvo. Kana iro rakanyanya kukonzera mamiriro ekunze izuva. Chii chiripo kuburitsa mashoma magasi? hongu Zvinowedzerwazve? Ehe. Chinja zvinhu zvakawanda? pachena. Asi isu hatina simba rekubata mamiriro ekunze, uye zvirinani ndisatove mupenyu parinodaro.
Nenzira, CO2 haisi gasi inosvibisa, ngatiregei kuzivisa zvisizvo. Iyo ndiyo gasi rehupenyu, iyo inosimbisa zvirimwa. Kuti ine mamiriro ekunze ndechimwe chinhu.
Pindura Antígono Carjedonio
CO2 haisi gasi rinosvibisa saNox, Co… igasi rinodziya.
Kuchaita chando gore rino muSoria?
Ndatenda Monica nekujekeserwa uye kuzvipira kwako. Isu vanhu takatakura pasi uye tiri kukohwa zvatakadyara ... ndinogara ndega, nekambani yangu yepamusoro, katsi dzangu, mumba, uye nenzvimbo yemoto. Muna 2015, mazuva mashoma ndaifanira vhenekesa choto, gore rino zvinondipa kuti ichave iine vhasi randinoisa sechishongo chemazhizha .... Katsi dzangu nyanzvi dzezvemamiriro ekunze .... vanogara vachigadzirira chando, asi vanga vari makore mashoma andinovaona zvakanyanya "Asina hanya" nechando. Kwaziso kubva kumakomo.
Mhoro muna 2017 tichava nenguva yakawanda yechando kupfuura yatiri mukutenda
Pindura kuna Oskar
Kuchatonhora sei muna 2017 asi zvatiri. Ndatenda
wow zvakanaka kufanotaura
Mhoro, nguva yechando ichatanga riini? Damn chemtrails uye vanosvibisa nyika yedu inodikanwa Ini ndinoda iyo inotonhora inotonhora gore rese ...
Haana zvakawanda zvasara. Pakutanga kwaGumiguru, tembiricha inotarisirwa kutanga kudzikira muSpain.
Usanetseke, zvese zvinosvika. 🙂
Hazvina kufanana: kuva, kugona, kugona Kuva.
Zvekuva nazvo, kuva NESIMBA
Zviri nyore kwazvo kuziva kana kuchanaya kana kwete.
Kana iro denga riri bhuruu, hakuzonaya.
Kana iri bhuruu uye makore achioneka, iwe unotofanira kutarisa, kana zvinopesana zvichitanga kupfuura nemuchadenga, uye handireve izvo zvidiki zvinosiiwa nendege dzekutengesa izvo zvinonyangarika apo ndege inofambira mberi, asi zvinopesana zvakakura zvinovhura uye gore mutete riri kuumba ,,,,, kuonekana nemvura.
Kana iwe ukaona kuti kune makore uye yave kuda kunaya uye iwe unogona kuona iyo nzira pakati peyakajeka uye yakajeka, izvo zvandinoziva iwe uchandiudza ini, zve condensation, zvirokwazvo iwo makore emvura achanyangarika. zvakare pasina mvura.
Kana iri yekubvisa makore, sirivheri iodide, kana iri yekusimudza tembiricha yenzvimbo, aluminium.
Sezvineiwo, tsika iyi iri kuoneka zvakanyanya kubvira Castilla la Mancha zvachinja kurimwa kwayo kwemazambiringa, kutambura muvinalopó kwandinobva, uye kunyangwe masangano evarimi, vafudzi, uye varindi veMurcia, Alicante, Valencia, Rioja, Balearic Islands vanozvidza izvi maitiro.
Uye tichitarisa izvo zvinotaurwa nezve CO2, pakanga paine nguva apo pasi rakauya kuzonakidzwa neinenge 100% okisijeni, (inouraya kune zvese zvipenyu muhuwandu hwakawanda), panguva iyoyo tembiricha yepasi yakakwira zvakanyanya, ichikonzera moto mukuru. Hapana chakambokura mumashure. Inozivikanwa seSahara, semuenzaniso. kana magwenga, munguva dzehuwandu hwakawanda hweCO2, masango makuru.
Handina kuzvitenda. Asi iwe ungofanire kutarisa kumatenga.
Ini ndinofunga fungidziro ye AMT ye2017
ivo vanochengetedza kupfuura iro rapfuura gore.
Iwe haudi kuti zvigunwe zvako zvibatwe, zvakajairika
JUAN ANGEL MORENO akadaro
Burritos! Usati watora kurerutsa dzidziso huru yakatemwa nekudyidzana kwenyika, nyora wega!
Dzidziso dzenhema dzenhema dzeGlobal Warming! Yakagara iri shamhu! Zvinotyisa!
Unozvirega uchishandiswa, hauna kana zano!
Chokwadi chagara chichizivikanwa, vesaenzi vakatendeseka vagara vachichisimbisa. Iyo yekutanga mumiririri inoshandura mamiriro ekunze epasi rino mhedzisiro iyo nyeredzi yainotenderera pairi pane yayo magnetic field.
Kuita kwakaderera (kushoma) kutenderera kwezuva kunokanganisa munda, izvo zvinobvumidza mwaranzi yepasi kuti isvike kumatenga ekumusoro, ichigadzira nitrogen oxides, inogadzira gore, inoshandura nekukanganisa kujekesa kwemhepo, nekudaro kutonhorera, gore rinotevera gore, mamiriro ekunze, achikurudzira iyo jet-rwizi uye kugadzirisa iyo trajectory yemafungu egungwa. Uku kushomeka kwemagineti epasi zvakare kune simba rekushanduka kwetectonic, ndiko kuti, kunowedzera kudengenyeka kwepasi, pamwe nebasa rekuputika.
Chiitiko chekudzikira mukujeka kwemuchadenga chakakonzerwa nezviitiko zvakadzika zvezuva zvakaonekwa kubvira 2010. Nguva yakwana yadarika yekukunda kupisa kwemhepo kwemakungwa mune mamiriro matsva. Kupera kwenguva ichangodziya nguva inoonekwa uye yave pedyo. Mamiriro ekunze haachazove sezvazvaive muzana ramakore rechiXNUMX. Izvo zvakapera.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, kutonhora kuchadzivirirwa kana, sezvakarongwa, anotevera maitikiro ezuva ezve minima akaitika, zvichiteerana, inova 95% yechokwadi!
Izvo zvinogona kutomboitika, kuti ndiko kutanga kweiyo inotevera glaciation pachayo, kana ikako kutonhora kutenderera kwapfuura, kwenguva isingazove isingasviki mazana maviri emakore, yakarebesa muHolocene, iyo isina kusimba kutevedzera kwePasi kutenderera pairi axis haibvumidze mwaranzi yezuva kuti inyunguduse sinou nechando zvakaunganidzwa mumatunhu ekumusoro kwakakwirira, nekuti izvi zvinowirirana zvakanyanya nepamusoro penyika, uye Nyika inowira MUCHIDZIDZO CHEMAZUVA MAZUVA ECHIKURU!
Pindura kuna JUAN ÁNGEL MORENO
Nhema dzakaipa, ndakagara muMadrid kwemakore makumi maviri, uye mamiriro ekunze anotyisa, chekutanga hapana tsime, maviri hapana matsutso, matatu kana Kare gore rino 20 Hakuna zhizha, kune pseudo-chitubu, shit, munguva pfupi ichava Sweden kana imwe yeaya nyika dzakaomeswa nechando, iwe uchaona, kuti hapana kudziya kwepasirese, kune kutonhora kwepasirese; (
uye zvese zvinorangana, Chemtrails uye kutonhodza kwepasirese, zviri pachena kuti ndinotsigira avo vakasiya zviyo zvavo zvejecha mune izvi zvinhu, zvinotaurwa naVaJuan Angel Moreno, chaizvo, ichokwadi, verengazve zvavanotaura
Zhizha rinogona kupisa kupfuura zvakajairika muSpain yese
Kubuda kweglacial hakuchangoitika chete muzhizha